Fidirana amin’ny CGA Antsirabe : tsy ferana ho 200 tapitrisa Ar ny vola kirakiraina | NewsMada
Fidirana amin’ny CGA Antsirabe : tsy ferana ho 200 tapitrisa Ar ny vola kirakiraina
Natao ny 13 febroary teo ny fivoriamben’ny Ivontoerana fitantanana nahazo alalana, na Centre de gestion agrée (CGA) eto Antsirabe. Nisy fitomboana kely (82) ny mpikambana satria lasa 182 ny taona 2015 raha 154 ny taona 2014. Marihina fa nahatratra 50 ireo mpikambana vaovao nanatevina ao anivon’ny CGA, ny taona 2014.
Nilaza ny tale mpanatanteraka ny CGA, Ralaimiarantsoa Mbahiny, fa taratry ny mamparisarisa ny toekarena eto amintsika izany. Mbola aleon’ireo mpandraharaha maro anisa ny miasa any ivelan’ny ara-dalàna ara-panjakana (informel). Amin’izay mantsy afaka miala bala amin’ny fandoavan-ketra sy haba isan-karazany izy ireo. Tsy maintsy mpandraharaha ara-dalàna daholo, na “formels” ny mpikambana ao amin’ny CGA.
Manankina ny fitazonana ny kaontiny sy ny fikajiana ny hetrany ao amin’ny CGA ny 2/3-n’ny mpikambana. Amin’ity taona 2016 ity, tsy hoferana ho 200 tapitrisa Ar intsony ny vola kirakirain’ny mpandraharaha na orinasa iray vao mahazo miditra ho mpikambana ao amin’ny CGA izy. Afaka miditra daholo, satria tsy ferana intsony ny farafahabetsahan’ny vola kirakiraina (chiffres d’affaire).
Hiezaka, araka izany, ny CGA handresy lahatra ireo mpandraharaha vaventy hiditra ho mpikambana. Antenaina hisy mpikambana 70 vaovao amin’ity taona ity. Hisy koa fiaraha-miasa amin’ny tetikasa Matoy sy ny BIT. Nanatrika ny fotoana ny filohan’ny filankevi-pitantanan’ny CGA, Ratovondrahona Berthin.